Taiwan: Ireo Tranobe Fivavahana – Fomba Iray Hitrandrahana ny Fomba Fifangaraon’ny Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Taiwan: Ireo Tranobe Fivavahana – Fomba Iray Hitrandrahana ny Fomba Fifangaraon'ny Kolontsaina
Voadika ny 28 Febroary 2018 16:50 GMT
Mamitaka ny endrika malazan'ny kolontsaina marolafy ho toy ny raritakelaka, salady iray lovia ahitàna ireo kolontsaina samihafa mifangaro nefa samy mitazona ny fahamendrehany manontolo. Maro karazana sahala amin'ny lasopy ireo kolontsaina, omena hanitra amin'ny alalan'ireo fangaro marobe, azo fantaraina ny sasantsasany. – Avy amin'ny boky “Ireo Kolontsaina sy fiarahamonina anatin'ny tontolo miovaova”, nosoratan'i Wendy Griswold.
Manana tantara lava mikasika ny zanany any ampielezana sy fanjanahantany i Taiwan. Na ireo voalaza fa “vahoaka teratany” tao Taiwan aza dia nitody tao an'arivo taonany lasa izay. Efa ho efajato taona izao, Shinoa marobe no nifindra avy any Shina honina tao Taiwan ary nanova ny kolontsaina teratany.
Ohatra, ny Siraya, tarika iray misy vahoaka teratany, dia manana ny fivavahany manokana, A-Li-Tsu. Tena tsotra ilay tranobe fivavahana napetraka ho tantara. Taorian'ny fanelezana ny kolontsaina shinoa, ny tranobe fivavahan‘izy ireo dia sahala amin'ireo tranobe fivavahana ho an'ny Andriamanitry ny Groundskeeper tao amin'ny kolontsaina Han.
Nozanahan'i Japana i Taiwan nanomboka ny taona 1895 ka hatramin'ny fiafaran'ny Ady Lehibe Faharoa. Tamin'ny taona 1949, nafoin'ny governemantan'ny Repoblikan'i Shina ilay faritany noho ny ady sivily tao Shina ary niova ho Taiwan. Vokatr'izany, tsy mahagaga ny fahitantsika ny sarivongan'i Bouddha amin'ny endrika japoney ao amin'ny tranobe fivavahana an'i Han (sary # 1), izay navaozina tamin'ny taona 1949.
Sary# 1 Sarivongan'i Bouddha amin'ny endrika japoney ao amin'ny tranobe fivavahana an'i Han (sary an'ny yueh-feng)
Tamin'ny taonjato faha-17, nitondra nandritra ny fotoana fohy tao Taiwan ny Espanola sy Holandey, ary toa nisarika ireo fandravahana mahazatra ny tranobe fivavahana an'i Han ny dindon'ny kolontsaina tandrefana – mampiseho lehilahy tandrefana iray miankanjo mianjaika, ao antemplin'i Han, ny sary sokitra eo amin'ny sary # 2.
Sary# 2 Fandravahana sarina lehilahy tandrefana iray ao amin'ny trano fivavahana an'i Han (sary an'i sunny)
Ny Espanola sy ny Holandey koa dia nitondra ny finoana kristianina tao taiwan, ary ny finoana kristianina no fivavahana iray isan'ny marobe indrindra ao Taiwan. Ny sary # 3 dia mampiseho fiangonana iray misy Torii (vavahady fidirana), vavahady Japoney mahazatra fahita matetika eo ampidirana ny toerana masina Shinto.
Sary# 3 Torii iray (Vavahady fidirana) ao amin'ny fiangonana (sary an'ny little fox)
Misy tsiro iray hafa nanampiana ireo tranobe fivavahana ao Taiwan: maoderina. Ampolo-taonany maro lasa, nangonin'ireo mpino ireo sarivongana marobe potika naneho ireo andriamanitra, ary nananganany tempoly ho azy ireo. Kanefa, ilay toerana nananganan'izy ireo tempoly dia lasa kianja ary nasain'ny governemanta nafindran-dry zareo toerana ny tempoly. Koa satria tsy manana toerana hamindrana ny tempoly izy ireo, rehefa tonga ny mpitandro filaminana dia izay izy ireo vao namindra ny tempoliny. Nony farany, nanapa-kevitra ny hamela ny tempoly hijanona teo ny governemanta, saingy noho ny tondradrano mety hitranga, namboarina ho azo atsangana rehefa ilaina ilay tempoly (manaraka ny halavan'ny andry efatry ny tempoly).
Aorian'ny famakiana ity lahatsoratra ity, mieritreritra ve ianao fa ny hamaroan'ny kolontsaina isankarazany hita ao Taiwan dia salady iray lovia na lasopy ?
6 andro izayFilipina